Ny sary famantarana Slack vaovao misy loko maro ary manaraka ny fanahiny | Famoronana an-tserasera
Slack no fitaovana fifandraisana ho an'ny matihanina par tsara indrindra ary tao anatin'ny taona vitsivitsy dia afaka nametraka ny tenany ho vahaolana amin'ireo karazana orinasa, orinasa, vondron'asa ary ekipa rehetra.
Omaly nohavaozina tamin'ny sary vaovao izay manome rivotra madio be dia be ho izay efa famantarana azy ireo hatramin'ny nanombohany. Amin'izany fomba izany dia mitaky ny fanavaozana ny tenany izy mba hanohizany manolotra izany fanoratana fitaovana iray izay manamora ny fizotran'ny asa amin'ny tontolon'ny asa samihafa.
Ary raha Slack, araka ny filazan'izy ireo ao amin'ny bilaogin'izy ireo, Tian'izy ireo ny sary famantarana teo aloha, nanana fahasahiana ampy handrosoana ary hivoatra amin'ny famolavolana, nefa tsy hahafoana ny fotony.
hiahotrahoranareo mampitandrina fa tsy fanovana izany satria tadiavin'izy ireo na nanome rivotra azy ireo ny marainan'ny volana Janoary, fa nanatratra tanjona iray. Araka ny nambarany, ny sary famantarana voalohany dia noforonina talohan'ny nananganana ilay orinasa. Tamin'ny fotoanany samihafa sy nahafaly izy io, ary inona ilay "octothorpe" nanasongadina izay rehetra tsapan'ny mpampiasa maro rehefa nanomboka ny diany tamin'ity fitaovana ity izy.
Amin'izany fivoarana izany amin'ny maha orinasa anao niova ihany koa ny sary famantarana. Na dia sary tsara aza, dia tsy nifanaraka, ary tsy nanana izany fahatsapana fampahatsiahivana izany fa teo amin'ny Slack ianao; farafaharatsiny izay lazain'izy ireo, satria raha milaza ny marina dia mora tokoa ny mampifandray azy amin'ilay fitaovana.
Izy ireo no mpamorona ny Slack ary izany niara-niasa tamin'i Michael Bierut sy ny ekipan'ny Pentagram hamoronana sary famantarana vaovao. Tsotra kokoa noho ny lokony miloko ary voadio kokoa, tsy manadino ny fotony. ny fivoarany manokana ho an'ny logo mahafinaritra ary ho an'ny fitaovana fifandraisana tsara.
Un fotoana tsara ho an'ny orinasa maro de Mamoaka logo toa an'i Uber izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Slack dia mamoaka fango vaovao feno loko nefa tsy manadino ny fotony
Ny habetsaky ny habe dia manova habe maimaimpoana (mandritra ny 2 andro) miaraka amin'i Assetizr